चुनाव नहुँदै ३९० जना निर्वाचित, एमालेका १३८ अन्यबाट कति ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
चुनाव नहुँदै ३९० जना निर्वाचित, एमालेका १३८ अन्यबाट कति ?
आइतबार, वैशाख २५ २०७९
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा देशभर ३९० जना पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले शनिबार साँझ निर्विरोध निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै ३ जना अध्यक्ष, ४ जना उपाध्यक्ष, १६४ जना दलित महिला सदस्य ७१ जना महिला सदस्य, ४८ जना वडा अध्यक्ष र १०० जना खुला सदस्य गरी ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ ।
यसरी निर्वाचित हुनेमा महिलाहरूको बाहुल्यता रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई थप विश्लेषण गर्दा ६३ दशमलव ३३ महिलाहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सङ्ख्यात्मक रुपमा हेर्ने हो भने २४७ जना महिलाहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
०७४ को निर्वाचनमा चार सय १२ जना निर्विरोध भएका थिए। यसपालि पनि यो संख्या घटेको हो । यसपालि पाँच दलीय सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित गठबन्धन चुनावी मैदानमा छ। गठबन्धन नगरी केही दल र स्वतन्त्रले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म निर्विरोध हुनेमा सत्तागठबन्धनबाट धेरै छन्। सत्तागठबन्धनतर्फ दुई सय १० जना निर्विरोध हुँदा स्वतन्त्र पदमा उम्मेदवारी दिएका ३५ जना निर्वाचित भए । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकामध्येबाट ६ जना वडाअध्यक्ष, ९ जना महिला सदस्य ४ जना दलित महिला सदस्य र १६ जना खुला सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भए ।
नेपाली कांग्रेसले एक सय १५ पदमा जित हाँसिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले ५९, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३५ र जसपाबाट एक पदमा निर्विरोध हुँदा सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एकजना पनि निर्विरोध हुन सकेनन् ।
यस्तै नेकपा एमाले एक सय ३८ पदमा निर्विरोध भएको छ। वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ मा उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। वैशाख १६ मा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय थियो।
यसपालि चुनावमा ३५ हजार दुई सय २१ पदमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्विरोध भएका पदमा भने चुनाव हुने छैन।
नेकपा एमालबाट एक अध्यक्ष दुई उपाध्यक्ष १७ जना वडा अध्यक्ष ६० जना दलित महिला सदस्य २५ महिला सदस्य र ३३ जना खुला सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । लिङ्गका आधारमा हेर्ने हो भने एमालेबाट ९१ जना महिला र ४७ जना पुरुष निर्वाचित भएका हुन् ।
नेकपा एमालेबाट पालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुनेमा डोल्पाको शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङ हुन् । उक्त पालिकाको पाँचवटा वडामा एमालेबाट वडाअध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने सोही दलबाट अन्य पदहरूमा पनि निर्वाचित भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस निर्विरोध निर्वाचित हुने दलमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस दलबाट एक उपाध्यक्ष १६ जना वडा अध्यक्ष ४५ जना दलित महिला सदस्य २१ जना महिला सदस्य र ३२ जना खुला सदस्य गरी कूल एक सय १५ जना निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसबाट डोल्पाको काईके गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निमा बुढा (महिला) निर्वाचित हुँदा सोहि पालिकाको अध्यक्ष पदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अंगद कुमार राना (पुरुष) निर्वाचित भएका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएकामध्ये अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध हुन सकेन् । यस पार्टीबाट वडा अध्यक्षमा तीन जना निर्वाचित हुँदा दलित महिला सदस्यमा ४३ जना महिला सदस्यमा आठ जना र खुला सदस्यमा पाँच जना गरी कुल ५९ जना निर्वाचित भए ।
पालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना निर्वाचित भए । प्रमुख पदमा सबैभन्दा बढी निर्विरोध हुनेमा यो पार्टी अगाडि रहेको छ । नेकपा एमाले र समाजवादी बाहेक अन्य कुनै पनि पार्टीबाट प्रमुख पदमा निर्विरोध भएन । एकीकृत समाजवादीबाट एक उपाध्यक्ष, छ जना वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य र महिला सदस्य ७/७ जना निर्वाचित हुँदा खुला सदस्य १२ जना निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तैगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीबाट दलित महिला सदस्यमा एक जना निर्वाचित भएकी छिन् । उम्मेदवारी मनोनयमा अग्र स्थानमा रहेको राप्रपाबाट दुई जना खुला सदस्य, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दुई जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवाद) बाट १/१ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, वैशाख २५ २०७९ १२:३०:३५